Nampiato ny sidina Kabul ny Pakistan Airlines taorian'ny nandidian'ny Taliban ny fihenan'ny vidiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Nampiato ny sidina Kabul ny Pakistan Airlines taorian'ny nandidian'ny Taliban ny fihenan'ny vidiny
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Pakistan Breaking News • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Nampiato ny sidina Kabul ny Pakistan Airlines taorian'ny nandidian'ny Taliban ny fihenan'ny vidiny.
Amin'ny ankamaroan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tsy manidina any Afghanistan intsony, dia nivarotra hatrany amin'ny $ 2,500 amin'ny PIA ny tapakila ho an'ny sidina mankany renivohitra Pakistaney, Islamabad, raha ny filazan'ireo masoivohon'ny fizahan-tany any Kabul, raha mitaha amin'ny $ 120- $ 150 talohan'izay.
Ny governemanta Taliban dia nandidy ny Pakistan International Airlines (PIA) hampihena ny vidin'ny tapakilan'ny fiaramanidina.
Pakistan International Airlines (PIA) no hany mpitatitra iraisam-pirenena misidina matetika miala ny renivohitr'i Afghanistan.
Hajanona hatrany ny zotra mandra-pahatongan'ny “raharaha mahomby”, hoy ny Pakistan International Airlines (PIA).
Araka ny voalazan'ny Pakistan International Airlines (PIA), ny governemanta Taliban ao Afghanistan dia nandidy ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, io no hany mpitatitra iraisam-pirenena manidina matetika miditra sy mivoaka ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kabul, mba hampihena ny vidin'ny zotram-piaramanidina ho any amin'ny ambaratonga talohan'ny fianjeran'ny governemanta Afghana tohanan'ny tandrefana tamin'ny volana aogositra .
Ho valiny, Pakistan International Airlines nampiato ny sidina rehetra tany amin'ny renivohitr'i Afghanistan, niantso ny fitsabahan'ny manampahefana Taliban ho “mavesatra”.
"Matetika niatrika fahatarana tsy ara-potoana ny sidina nataontsika noho ny fihetsika tsy dia natombon'ny manampahefana fiaramanidina Kabul," Abdullah Hafeez Khan, hoy ny mpitondra tenin'ny PIA.
Raha ny filazan'ny PIA, matetika dia “manambany olona” ny tompon'andraikitra taliban ary nisy fotoana “nikirakira” olona iray.
Hajanona foana ny zotra Kabul mandra-pahatongan'ny “fotoana mahamety azy”, hoy ihany ny tompon'andraikitra amin'ny kaompaniam-pitaterana.
Talohan'izay dia nampandre ny Taliban ny Taliban Pakistan International Airlines ary ny Kameran'ny afghaniana Kam Air fa hiato ny asan'izy ireo ao Afghanistan raha tsy nanaiky ny hampihena ny vidiny izay tsy azon'ny ankamaroan'ny Afghana intsony izy ireo hatramin'ny nisian'ny fanjanahana Taliban.
Ny minisitry ny fitaterana afgàna dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa ny vidin-dàlana dia tokony "ahitsy mba hifanaraka amin'ny fepetra amin'ny tapakila alohan'ny handresen'ny Emira Islamika" na hijanona ny sidina.
Ny sidina eo anelanelan'ny Afghanistan sy Pakistan dia voafetra fatratra hatramin'ny nisokafan'ny seranam-piaramanidina Kabul tamin'ny volana lasa teo taorian'ny fandroahana korontana nataon'ny Tandrefana maherin'ny 100,000 sy Afghana marefo taorian'ny fakàn'ny Taliban an'i Afghanistan.
Miaraka amin'ny krizy ara-toekarena mitombo manampy ny ahiahy momba ny hoavin'i Afghanistan eo ambanin'ny Taliban, be ny fangatahana sidina hivoaka, miharatsy noho ny olana miverimberina amin'ny fiampitana sisintany mankany Pakistan.